Mpikambana ao amin’ny SADC : Nahatsapa ny fivoarana tsara eto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaMpikambana ao amin’ny SADC : Nahatsapa ny fivoarana tsara eto Madagasikara
Tsy ilay endrika ratsy tamin’ny krizy tamin’ny 2009 sy nandritry ny tetezamita iny intsony no sary mivoaka eo anivon’ny mpikambana ao amin’ny SADC. Madagasikara mandroso sy nahavita ezaka lehibe tamin’ny fampijoroana fandriampahalemana sy fitoniana ara-politika ary fampivoarana ny mponina ao aminy no endrika vaovao ao an-tsain’ireo mpikambana ao main’ny Sadc amin’izao, hoy ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana, nandritra ny tatitra nataony tamin’ireo mpikambana eo anivon’ity fikambanana rezionaly aty Afrika ity.
Nisy ny tatitra nataony momba ny fivoaran’ny toedraharaham-pirenena eto Madagasikara, nanditry ny Fihaonana an-tampon’ny Sadc faha-37 natao tao Pretoria ny faran’ny herinandro teo. Fihaonamben’ny Filoham-pirenena sy ny lehibena governemanta izy io, izay naharitra roa andro, ka nivoatra tamin’izany ny fandraisana an’I Comore ho mpikambana vaovao.
Na izany aza, dia nanainga an’ireo mpikambana ao anatin’ny Rafitra Rezionaly aty Afrika tapany atsimo ity ny Praiminisitra, mba hanampy an’I Madagasikara hanana fitoniana politika maharitra. Tsy takona afenina mantsy fa ireo mpanao politika toy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc, izay mahalala tsara an’izany Sadc izany, no manao izay hisian’ny korontana politika amin’ny alalan’ny fambolena fivoriana tsy nahazoana alalana etsy sy eroa ka ny tanjona amin’izany dia haharatsy endrika an’I Madagasikara eo imason’itony rafitra rezionaly itony.
Kihon-dalana iray nahafahan’ny solontenan’I Madagasikara, ny praiminisitra Mahafaly Olivier, nampahafantatra ny fisian’ny “ Centre Régional de la Fusion Maritime” na Crfm izay miorim-paka eto Madagasikara koa io fihaonambe an-tampon’ny Sadc tatsy Pretoria io. Manampy ireo firenena mpikambana afa-miatrika ny asa ratsy eny an-dranomasina izy io. Miainga avy amin’io ivon-toerana io no hanomezana ny antontam-baovao rehetra hifehezana ny asa rehetra eny an-dranomasina. Niaiky ny mpikambana rehetra eo anivon’ny Sadc fa efa tena mivoatra tokoa ny fandroson’ny Madagasikara ary nahatsapa ny asa mivaigana hataon’ireo mpitondra.